Puntland Voice – Page 1044 – Codka Dalka iyo Dadka
Dagaal Saaka Aroortii ka qarxay Tuulada Qoryaale oo u dhow Degmada Ceel Buur iyo Ciidamada Xarakatu Shabaabul Mujaahidiin oo halkaasi xoog milatarei kula wareegay.
Ceel-buur (AB):- Ciidamo ka tirsan kuwa Ururka Xarakatu Shabaabul Mujaahidiin ayaa saaka weerar culus ku qaaday Tuulada Qoryaale oo ku dhow Degmada Ceel-buur ee Gobolka Galagaduu halkaasoo ay ku sugnaayeen ama ay gacanta ku hayeen Ciidamada Ururka Ahlu suna. Labada […]
Raage-Ceele (AB):- Wararka laga helayo Saaka Degamada Raage-Ceele ee Gobolka Sh.dhexe ayaa sheegaya in halkaasi Xalay uu dagaal ku dhexmaray Ciidamo Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab iyo Ciidamo taabacsan Ururka kale ee Ahlu suna. Dagaalka oo dhacay xalay saq dhexe ayaa gaystay […]
Duqeymo Khasaaro dhaliyey oo Ka dhacay Waqooyiga Muqdisho
Galabnimadi maanta waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay duqeymo xoogan oo dhaliyey khasaaro isugu jirta dhimasho iyo dhaawac. Duqeymahaan ayaa waxaa ay ka dhaceen Waqooyiga magaaladaasi gaar ahaan xaafadaha lagu kala magacaabo Yaqshiid,C/casiis,Shibiis iyo Kaaran. Saraakiisha Caafimaadka oo aan xirriro kala […]
« Previous 1 … 1,042 1,043 1,044